Shenzhen: Musical Hotbed | China Unlocked – China Report ASEAN
Shenzhen: Musical Hotbed | China Unlocked
April 8, 2018 China Report ASEAN China Unlocked Leaveacomment
Shenzhen glitters gracefully when the skies are blue. Shiny new buildings, monumental skyscrapers, modernly designed buildings, tidy roads and large parks compose the beauty of Shenzhen.
The world’s youngest and most rapidly developing metropolis, the city is hosting the Shenzhen Belt and Road International Music Festival for second year inarow.
Although the music festival has just turned two, it has clearly reached world-class ranks. The six-week festival features participation by 700 outstanding musicians from 40 countries. Actually, the 40 countries are fewer than anticipated because some were not available to participate this year. But authorities in Shenzhen are working to invite more countries from around the world to participate in the music festival in the coming years.
Shenzhen now hasapopulation of more than 12 million and continues to develop rapidly in every sector. It blows the mind that Shenzhen wasasmall fishing town of 30,000 only 30 years ago. Now, the city is home to 60,000 designers and the headquarters of many well-known multinational companies such as Huawei, Tencent, ZTE, JXD, Hasee and BYD. Shenzhen has even fostered numerous nationally famous Chinese musicians.
It’s hard to pin downatop landmark of Shenzhen because the entire city is suchalandmark development.
The success of Shenzhen’s music festival evidences that its residents tightly embrace the arts even though high technologies and modern commerce are its calling cards.
Spectators’ eyes were consistently glued to the stage during the opening ceremony of music festival composed ofajoint performance featuring famous Chinese and international musicians such as Chinese-American violinist Cho-Liang Lin, Argentinian Bandoneon Walter Rios, French trumpeter Lucienne Renaudin Vary, New York Metropolitan Opera House baritone Yunpeng Wang and Chinese vocalist Lei Jia. The audience’s enthusiasm for performances by locals and visitors alike testified to the character of city residents.
During the opening ceremony, Chinese Uyghur ethnic folk songs mesmerized the audience. Applause thundered throughout the hall when the Uyghur performance concluded.
A local Shenzhen youth band, Proud of Shenzhen, proved that Shenzhen isahotbed of strong musicians on the third day of the music festival.
According to Linzi Pan,amember of Proud of Shenzhen, almost every family in Shenzhen ownsapiano, and parents encourage their children to learn musical instruments and enroll them in classes atavery young age. Pan has performed in music concerts globally and won international awards. She started learning to play the piano at age5and attended Curtis Institute of Music in the U.S. for nearly five years. She suspects that so many great musicians come from Shenzhen because parents there always encourage their children to practice music regularly.
Members of the Proud of Shenzhen group include talented young musicians such as New York Metropolitan Opera House singer Yunpeng Wang, pianist Feifei Dong who reached the finals in “Van Cliburn,” Linzi Pan, the only Chinese prize winner of the Shenzhen International Piano Concerto Competition, cellist Shangwen Liao and violinist Zhang Wei.
Yupeng Wang’s heavenly baritone voice and Feifei Dong’s breathtaking piano playing inspired tumultuous applause from the packed house.
Han Wang Xi, an official with the Shenzhen Municipal Government, declared that music has no borders and is key to spreading love. His daughter attended Oxford University to study music.
According to him, every district of Shenzhen hasamusic venue and more music academies and opera houses are coming soon.
The closing ceremony of Shenzhen’s Belt and Road International Music Festival will be held on April 29. Shenzhen,akey city on the “Belt and Road” route, will host more music festivals and cultural events in the future and feature participation from even more countries around the world.
အပြာရောင်မိုးကောင်းကင်ကြီး၏အောက်တွင် ရှန်ကျန်းမြို့က ကျက်သရေရှိစွာဖြင့် တဖိတ်ဖိတ် တောက်လျက်။ သစ်လွင်သည့် အဆောက်အအုံများ၊ ထင်ရှားသည့်မိုးမျှော်အဆောက်အအုံများနှင့် ဒီဇိုင်းဆန်းသည့် ခေတ်မီအဆောက်အအုံများ၊ သပ်ရပ်သောလမ်းမကြီးများနှင့် ကျယ်ဝန်းသည့် ပန်းခြံများက ရှန်ကျန်းမြို့၏ အလှကို ဖြည့်စွက်ပေးနေကြသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြို့သက်အငယ်ဆုံးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးဖြစ်သည့် ရှန်ကျန်းမြို့တွင် Shenzhen Belt and Road International Music ပွဲတော်ကို ကျင်းပသည်မှာ ၂ နှစ်မြောက် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဂီတပွဲတော်အနေဖြင့် သက်တမ်း ၂ နှစ်သာ ရှိသေးသော်လည်း ကမ္ဘာ့အဆင့်ပွဲတော်ဖြစ်ကြောင်း သိသာထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ သီတင်းပတ် ၆ ပတ်မျှ ကြာမြင့်မည့် ဂီတပွဲတော်တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ မှ ထင်ရှားသည့် ဂီတပညာရှင် ၇၀၀ ခန့် ပါဝင်ကြသည်။ အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ ၄၀ သာ ပါဝင်နိုင်သေးသော်လည်း လာမည့်နှစ်များတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ ပိုမိုပါဝင်ရန် ရှန်ကျန်းမြို့မှ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
ရှန်ကျန်းသည် လက်ရှိအချိန်တွင် လူဦးရေ ၁၂ သန်းကျော်ဖြင့် ကဏ္ဍစုံ အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လျက်ရှိသည်။ သို့သော် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်ကမူ လူဦးရေ ၃၀,၀၀၀ ခန့်သာရှိသည့် တံငါမြို့ငယ်လေး တစ်မြို့သာဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် ရှန်ကျန်းသည် ဒီဇိုင်နာ ၆၀,၀၀၀ ကျော်နှင့်အတူ Huawei ၊ Tencent ၊ ZTE ၊ JXD ၊ Hasee နှင့် BYD တို့ကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့ကျော်ကုမဏီကြီးများ ရုံးစိုက်ရာ အချက်အချာနေရာဖြစ်နေပေပြီ။ ထို့ပြင် ရှန်ကျန်းသည် ထင်ရှားသည့် တရုတ်ဂီတပညာရှင်အမြောက် အမြား မွေးဖွားရာနေရာလည်း ဖြစ်နေပြန်သည်။
အကယ်၍ ရှန်ကျန်းမြို့၏ ထင်ရှားသော landmark ကို ပြပါဆိုလျှင် တစ်နေရာတည်းကို ကွက်ပြ၍ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ၊ ရှန်ကျန်းမြို့ကိုယ်တိုင်ကပင် ထူးခြားသည့် landmark ဖြစ်နေ၍ဖြစ်သည်။
ရှန်ကျန်းမြို့၏ ဂီတပွဲက မြို့ခံများအနေဖြင့် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ တိုးတက်လာသော်လည်း ဂီတအနုပညာ ဘက်တွင်လည်း အားမနည်းကြောင်း သက်သေပြလျုက်ရှိသည်။
တရုတ်-အမေရိကန်တယောပညာရှင် ချိုလျန်လင်း၊ အာဂျင်တီးနားဘန်ဒိုနီယွန် (အကော်ဒီယံနှင့် အလားတူသည့်တူရိယာ) ပညာရှင် ဝေါ်လ်တာရီရော့စ်၊ ပြင်သစ်ထရမ်းပက်ပညာရှင် Lucienne Renaudin Vary၊ နယူးယောက်မတ္ထရိုပိုလီတန်အော်ပရာဟောက်စ်အဆိုတော် ယူဖန်ဝမ်နှင့် တရုတ် အဆိုတော် လဲ့ကျားတို့ကဲ့သို့ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ နာမည်ထင်ရှားသည့် ဂီတပညာရှင်များက ပူးပေါင်း ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့်အတွက် ဂီတပွဲတော် ဖွင့်ပွဲနေ့တွင် ပရိသတ်များ နှစ်သက်အားရစွာဖြင့် တခဲနက် အားပေးခဲ့ကြသည်။ ဂီတပညာရှင်များ၏ ဖျော်ဖြေမှုကို ပရိသတ်များ စိတ်အားထက်သန်စွာ အားပေးမှုက ရှန်ကျန်းမြို့ခံများ၏ ဂီတအဆင့်အတန်းကို သက်သေပြလျက်ရှိကြသည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် တရုတ်ဝီဂါလူမျိုးများ၏ ရိုးရာတေးများက ပရိသတ်များကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြီး ၀ီဂါများ ဖျော်ဖြေမှု ပြီးဆုံးသွားသည့်အခါတွင် လက်ခုပ်သံများ ခန်းလုံးပြည့် သောသောညံသွားခဲ့သည်။
ဂီတပွဲတော်၏ တတိယမြောက်နေ့တွင်လည်း ရှန်ကျန်းမြို့ခံ လူငယ်တေးဂီတအဖွဲ့ဖြစ်သည့် Proud of Shenzhen က ရှန်ကျန်းမြို့အနေဖြင့် ဂီတပညာရှင်များ၏ ဘူမိနက်သန်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။
Proud of Shenzhen အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် လင်ဇီပန်၏အဆိုအရ ရှန်ကျန်းမြို့ရှိ မိသားစုတိုင်းနီးပါးတွင် စန္ဒယားတစ်လုံးစီရှိကြပြီး မိဘများက သူတို့၏ သားသမီးများကို ဂီတတူရိယာ တစ်ခုခု တီးတတ်စေရန် ငယ်စဉ်ကပင် ဆရာများထံအပ်နှံ၍ သင်ကြားပေးကြသည်ဟု သိရသည်။ လင်ဇီပန်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများတွင် ပါဝင်တီးခတ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ဆုတံဆိပ်များကိုလည်း ဆွတ်ခူးရရှိထားသည်။ သူမသည် အသက် ၅ နှစ်အရွယ်တွင် စန္ဒယားစတင် သင်ယူခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်ရှိ Curtis Institute of Music တွင် ငါးနှစ်နီးပါး ပညာသင်ကြား ခဲ့သည်။ မိဘများက သားသမီးများကို ဂီတပုံမှန်လေ့ကျင့်ရန် အမြဲတစေ တိုက်တွန်းနေမှုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ရှန်ကျန်းမှ ထင်ရှားသည့် ဂီတပညာရှင်များစွာ ထွက်ပေါ်ရသည်ဟု သူမက ယူဆထားသည်။
Proud of Shenzhen အဖွဲ့တွင် နယူးယောက် မတ္တရိုပိုလီတန်အော်ပရာဟောက်စ် အဆိုရှင် ယူဖန်ဝမ်၊ “Van Cliburn” နိုင်ငံတကာစန္ဒယားပြိုင်ပွဲ ဖိုင်နယ်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သော ဖေးဖေးဒေါင်၊ Shenzhen International Piano Concerto Competition တွင် ဆုရရှိခဲ့သည့် တစ်ဦးတည်းသော တရုတ်နိုင်ငံသူ လင်ဇီပန်၊ တယောကြီးပညာရှင် ရှန်ဝန်လျောင်နှင့် တယောပညာရှင် ကျန်းဝေတို့ကဲ့သို့ ပါရမီရှင်လူငယ်ဂီတပညာရှင်များပါဝင်ကြသည်။
ယူဖန်ဝမ်၏ အံ့သြမင်သက်ဖွယ် အသံအား၊ ဖေးဖေးဒေါင်၏ အသက်ရှူမှားလောက်ဖွယ် စန္ဒယားတီးခတ် ဖျော်ဖြေမှုတို့က ကဇာတ်ရုံအတွင်း ပရိသတ်များကို အသက်ရှူဖို့ပင်မေ့လျော့သည်အထိ ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။
ရှန်ကျန်မြူနီစီပယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ ဟန်ဝမ်ရှီက ဂီတတွင် နယ်စည်းမရှိကြောင်း နှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဟန်ဝမ်ရှီ၏ သမီးဖြစ်သူသည် လက်ရှိအချိန်တွင် အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်တွင် ဂီတပညာအထူးပြုဖြင့် ကျောင်းတက် လျက်ရှိသည်။
ဟန်ဝမ်ရှီ၏အဆိုအရ ရှန်ကျန်းမြို့ရှိ ခရိုင်တိုင်းတွင် ဂီတရိပ်မြုံတစ်ခုစီရှိပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ဂီတ အကယ်ဒမီများနှင့် ကဇာတ်ရုံများကို ဆက်လက်တည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Shenzhen’s Belt and Road International Music Festival ၏ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ရှန်ကျန်းမြို့သည် Belt and Road လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် အရေးပါ သည့်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး လာမည့်အနာဂတ်တွင် ဂီတပွဲတော်များနှင့် အခြားသော အနုပညာပွဲတော်များကို ပိုမိုကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပွဲတော်များတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှနိုင်ငံများစွာ ပိုမိုပါဝင်လာစေရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပေသည်။
ShenzhenShenzhen Belt and Road International Music Festival
Previous Post: Moving Toward Thailand 4.0 | China-Thailand
Next Post: No Country Is an Island | China-ASEAN